Somali English Spanish Arabic Nepali Chinese
Falanqaynta Dhaqanka ee la dabaqay (ABA)
Dabeecadaha adag ee ABA
Kooxaha Xirfadaha Bulshada
Adeegga Ka-dhaafitaanka Ootiisamka Mgmt
Baaritaan bilaash ah
Xiriirinta iyo Kheyraadka waxtarka leh
FAQs & Foomamka
EEG BILAASH AH
Berrito ka dhalaal badan ayaa maanta bilaabanaysa
Maalin kasta waxaan ka caawinnaa carruurta deegaanka Fargo sida adiga oo kale qaba autism ama naafada kale ee korriinka inay bartaan xirfado iyo dabeecado cusub si ay u keenaan madax-bannaani dheeraad ah iyo farxad nololeed
Nala soo xidhiidh si aad u bilowdo
Kliinikada ugu horraysa ee BHCOE-AQOONSATAY EE WAQOOYIGA DAKOTA
Aqoonsiga heerka sare ee bixiyayaasha daryeelka caafimaadka habdhaqanka ee daryeelka kiliinikada, shaqaaleysiinta, iyo qanacsanaanta macmiilka.
Fargo’s All-in-One, Rugta Daawaynta Badan
Meesha ilmahaagu ka heli karo taageerada ay u baahan yihiin — dhammaan hal meel ku habboon
Wareega Buuxa, Farqiga All-in-One
Goobta Full Circle, horumarka ilmahaaga waa yoolkayaga koowaad. Taasi waa sababta aan u bixino daaweyno badan, oo ay ku jiraan ABA, hadaliyo daaweynta shaqada. Tani waxay u abuurtaa hab fudud oo uu ilmahaagu ku gaadhi karo yoolkiisa, maadaama kala-guurka la yareeyey iyo daaweeyayaashayadu dhammaantood waa isku bog.
Oo ka duwan inta badan rugaha caafimaadka, kuma xaddidno ilmahaaga inuu la kulmo hal daaweeyaha hal goob markiiba. Waxaan wax u qabanaa si ka duwan — gaar ahaan si aan u caawinno carruurta halganka ku jirta.
Sida habkayaga-isku-jirka ah uu u caawin karo ilmahaaga halganka ku jira
Haddii ilmahaagu la halgamayo caqabado is-daba-joog ah, habkayaga wada-shaqeynta oo dhan waxay noqon kartaa beddelka ciyaarta.
Tusaale ahaan, waxaad tidhaahdaa in ilmahaagu hadalka ku adag yahay sababtoo ah caqabad xagga dhaqanka ah. Xaaladdan oo kale, qof ka socda kooxda habdhaqanka ayaa soo gali doona oo ka garab shaqayn doona daaweeyaha hadalka si uu si tartiib ah u caawiyo ilmahaaga inuu ka gudbo caqabadaha horumarka.
Iyadoo diiradda la saarayo daaweeyayaasha oo leh meelo badan oo khibrad leh, ilmahaagu waxa uu heli doona jawi taageero leh oo ay wax ku baran karaan — laga yaabee markii ugu horeysay abid — xirfado iyo dabeecado cusub oo u suurtagelinaya inay sii wadaan waxbarashada iyo horumarka.
Natiijooyinka dhabta ah ee aduunka oo isbedel sameeya
Waad ku mahadsan tahay habkayaga wada shaqayneed ee gaarka ah, qaar badan oo ka mid ah macaamiisheena oo markii hore ku guul daraystay hadalka ama daaweynta shaqada meelo kale ayaa hadda awood u leh inay nala galaan adeegyadaas. Tani waxay siinaysaa carruurtan — iyo kuwa kale ee ka gudbaya caqabadaha kala duwan — fursad ay ku gaaraan yoolal cusub oo ku saabsan meelo badan, si ay ugu dambeyntii u gaaraan awooddooda buuxda.
Ku qanacsanaanta daryeelkayaga ayaa celcelis ahaan celcelis ahaan 90%
Xigasho: Xarunta Caafimaadka Dhaqanka ee heer sare
Caawinta carruurta da’ kasta leh — laga bilaabo dhallaanka ilaa da’da 21
Falanqaynta Dhaqanka ee la dabaqay
Xoojinta dhaqamada bulsheed ee muhiimka ah ee ilmahaaga
La-talinta Habdhaqanka ku salaysan dugsiga
Khabiirada bixinta taageerada dugsiga dhexdiisa
Akadeemiyada Circle Full
Dugsigeena gaarka loo leeyahay ee K‑5 oo loogu talagalay carruurta leh waxyaabaha gaarka ah
Waxaan kaa caawin doonaa inaad dhex gasho caymiska
Waxaanu la shaqayn doonaa shirkaddaada caymiska oo aanu hubin doonaa in aad laba jibaaran tahay ka hor inta aanad bilaabin adeegyada.
Waayo-aragnimada Goobaabin buuxda
Caawinta Saxda ah, Ilmahaagu waxa uu Samayn Karaa Horumar Nolol-Beddelaysa
Isgaarsiinta maalinlaha ah
Xidhiidhku waa furaha. Waxaad heli doontaa warbixin kooban oo maalinle ah oo ku saabsan horumarka ilmahaaga, waxaanan sidoo kale kula kulmi doonnaa si joogto ah. Waxaan la wadaagi doonnaa agabkayaga kooxda dugsiga ilmahaaga iyo bixiyeyaasha kale si aan arrimuhu ugu sii soconno sida ugu habboon ee suurtogalka ah ilmahaaga.
Saaxiibtinimo iyo Martiqaad
Qaar badan oo ka mid ah macaamiisheenna waxay yiraahdaan waxaan u dareemaynaa qoys ahaan iyaga. Laga bilaabo daqiiqada aad ka soo gasho albaabka, waxa ku soo dhawayn doona shaqaalahayada miiska hore ee diiran iyo saaxiibtinimo. Waan ognahay inaad mashquul tahay, waxaana mudnaanta siina inaad u diyaargarowdo waqtiga. Waxaan u habayn doonaa jadwalkaaga sida ugu fiican ee aan awoodno.
Dhammaan-in-Hal ku habboonaanta
Rugahayaga Dhammaan-In-One waxay ka dhigan tahay in ilmahaagu ku sii wato xirfadaha dhisidda hal meel iyada oo aan la kordhin kala-guurka. Waxaad heli doontaa inaad waqti yar ku qaadato maareynta saadka ee ballamaha badan iyo waqti badan oo noloshaada ah.
“Qaar badan oo ka mid ah macaamiisheena oo ku guul darreystay hadalka iyo OT sababo la xiriira dhaqankooda ayaa hadda awood u leh inay nala galaan daawaynta, iyadoo ay ugu wacan tahay iskaashiga xooggan ee ka dhexeeya daaweeyayaashayada.”
Wada-milkiilaha Xalka Carruurta Gooba Buuxa
Iyo marka ilmahaagu horumar sameeyo, hadafkayagu waa inaad aragto tayada noloshaada oo sidoo kale soo hagaagaysa (sida safar nabad ah oo aad ku tagto dukaanka raashinka). Tilaabo kasta waa lagu xisaabtamayaa, waxaanan halkan u joogi doonaa inaan kaa caawino inaad u dabaaldegto guul kasta iyo mid kasta!
Isla markiiba fal
Cilmi baaris ayaa muujisay faragelinta hore inay tahay habka ugu waxtarka badan ee lagu daweyn karo carruurta naafada ah.
Haddii aadan hubin in ilmahaagu u baahan yahay adeegyo, waxaad ka hubin kartaa horumarkooda korriinka aaladda Horumarka Horumarka ee CDC ee hoose ama waxaad naga ballansan kartaa baadhis bilaash ah.
Hubiyaha Horumarka Horumarineed (CDC)
Nala soo xidhiidh Si aad u hesho Baadhitaan bilaash ah
Su’aalo ma qabtaa?
Ururka BHCOE-Ugu Horeeya ee La Aqoonsado ee gobolka North Dakota
Aqoonsiga Xarunta Caafimaadka Habdhaqanka ee heer sare (BHCOE) waxay aqoonsanaysaa bixiyeyaasha caafimaadka habdhaqanka ee ka sarreeya dhinacyada tayada bukaan-socodka, shahaadooyinka shaqaalaha iyo qanacsanaanta macaamilka waxayna kor u qaaddaa nidaamyada kor u qaadaya meelahan.
Akadeemiyada GOOBTA BUUXA
ABA — Dhaqannada adag
North Dakota Service Waiver
Xuquuqda daabacaadda ©2022 Daawaynta Carruurta Goobo Buuxa. Dhammaan Xuquuqaha Way Dhawrsan Yihiin.
Jaclyn waxay asal ahaan ka timid Harvey ee miyiga Waqooyiga Dakota. Waxay khibrad u leedahay la shaqaynta dadweynaha carruurta ee labadaba dugsiga iyo goobaha bar-barashada gaarka ah. Jaclyn waxa kale oo ay khibrad u leedahay ka shaqaynta Wax ka qabadka Hore ee carruurta laga bilaabo dhalashada ilaa saddexda sano. Waxay haysataa Shahaadada ASHA ee Kartida Caafimaadka waxayna u fasaxday inay ku tababarto Waqooyiga Dakota. Jaclyn waxay aad u qiimeysaa xidhiidhka ay la dhisto macaamiisheeda iyo qoysaskooda waxayna ku raaxaysataa taageeridda guud ahaan xirfadaha deegaanka dabiiciga ah. Shaqada ka baxsan, Jaclyn waxay ku raaxaysataa inay waqti la qaadato asxaabteeda iyo qoyskeeda, wax akhrinta, iyo ku faraxsanaanta kooxaha isboortiga ee ay jeceshahay.
Nidaamka Isgaadhsiinta Sawirka Isdhaafsiga
Taageerada Luuqadda Bulshada
Dib u dhaca luuqada iyo khalkhalka
Jaamacadda Gobolka Minnesota Moorhead
Master of Science: Hadalka-Luuqada Pathology
Shahaadada qalin-jabinta: Autism Spectrum Disorder
Bachelor of Science: Sayniska Hadalka-Luuqadda-Maqalka
Yar: Waxbarashada Gaarka ah
Rachel waxay asal ahaan ka timid Harvey ee miyiga Waqooyiga Dakota. Rachel waxay leedahay waayo-aragnimo 10 sano ka badan oo ka shaqaynaysa nidaamka dugsiga, ugu horrayn ee goobta Waxbarashada Gaarka ah ee Carruurnimada Hore ee la shaqaynaysa carruurta da’doodu tahay 3–5. Rachel waxay haysataa Shahaadada ASHA ee Kartida Caafimaadka waxayna u fasaxday inay ku tababarto Waqooyiga Dakota. Rachel waxay heshay tababar ku saabsan Hannaanka Isgaarsiineed ee Fariinta Muuqaalka iyo Sawirka Isdhaafsiga. Rachel iyo ninkeeda Joe waxay leeyihiin saddex carruur ah. Waqtigeeda firaaqada ah, waxay ku raaxaysataa safarka, ciyaaraha kala duwan, ku farxidda Green Bay Packers iyo NDSU Bison, iyo daawashada carruurteeda hawlahooda gaarka ah.
Dhaqanka afka ah
Nidaamyada waxbaridda falanqaynta dabeecadda la dabaqay
Aaladaha isgaadhsiinta ee kordhinta iyo beddelka ah
Habka Isgaarsiinta Is-weydaarsiga Sawirka (PECS)
Daahitaanka luqadda iyo cilladaha
Jaamacadda Gobolka Minot
Master of Science: Dhibaatooyinka Isgaarsiinta
Jaamacadda Gobolka Minnesota, Moorhead